Xaaladda shirkadda dayuuradaha ee SAS iyo wadahaddalladii u socdey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaaladda shirkadda dayuuradaha ee SAS iyo wadahaddalladii u socdey
La cusbooneeyay måndag 19 november 2012 kl 10.53
La daabacay måndag 19 november 2012 kl 09.25
Waxaa illaa hadda weli heshiis guud aan qalinka kula duugin maamulka shirkadda SAS mid ka mid ah siddeedda urur-shaqaale ee shaqaalaha shirkadda duulimaadyada ee SAS, waana mid ay tahay lagama maarmaan, sidii shirkaddu hoowlaheeda halkaa uga sii wadan lahayd.
Weli waxaan dhumin rajadii ahayd in SAS la badbaadiyo, halka uu weli mid ka mid ah ururrada shaqaalaha ee shirkaddu aannu qalinka ku duugin heshiisyada la damacsan yahey sidii wax looga bedeli lahaa. Ururkaasina oo ah ururka shaqaalaha dayuurradaha gudahooda ee Danmark ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno CAU.
Habeen-nimadii xalayto ayuu qalinka ku duugay mid ka mid ah labada urur shaqaale shirkadda SAS ee Noorway (SNK), sidoo kale ururrada duuliyeyaasha ee waddammada Iswiidhen, Noorway iyo Danmark iyo ururka shaqaalaha ee Unionen oo matala 600 oo ka mid ah shaqaalaha dayuurradaha dhexdooda ee shirkadda SAS. Warkan ayaa la shaaciyey wax yar dabadeed shantii- aroornimo ee saaka.
– Go’aan aad iyo aad u adag ayuu ahaa, sida ay sheegtay madaxa ururka shaqaaluhu Cecilia Fahlberg.
– Midda noogu muhiimsaneyd ayaa ahayd sidii aan ku badbaadin laheyn goobaha shaqada ee xubnaha ururka, halka dhanka kale aan ka dagaalameyney inaan hoos loo dhigin mushaarooyinka, waana howl aan ku guuleeysaney. Waa go’aan adag, iyadoo aannu la soconno xaaladda adag ee howlaha shirkadaha dayuurradaha.
Heshiiskan ayuu macnihiisu yahay in aan la dhimin mushaarooyinka shaqaalaha iswiidhishka ee dayuurradaha gudahooda ka howl-gala, hase yeeshee kor u kaceen saacadihii shaqada, iyo da’da lagu galo howl-gabka oo la gaarsiiyey 65 sanno, halka ay hore uga ahaan jirtay 60 sannadood.
Sören Skoog, ku-xigeenka ururka shaqaalaha duuliyeyaasha ayaa sheegay inay hoos u dhaceen shuruudaha xaaladda shaqo ee shaqaalahaasi.
– Waxay ka dhigan tahay keydin dhaqaale ee kharashka ku baxa duuliyeyaasha. Iyada oo goolka laga leeyahey uu yahay is-bedel lagu sameeyo, haddey noqon lahayd dhanka mushaarooyinka, gunnada howl-gabka iyo shuruudaha xaaladda shaqo. Waa heshiis hoos loogu dhigay mushaarooyinka dhaqaale gaarsiisan bil mushaarkeed ee sannadkii, toddoba maalmood oo shaqo dheeriya iyo dib u habeeyn lagu sameeyey xilliga da’da howl-gabka, sida uu sheegay Skoog.
Duulimaadyada dayuurradaha shirkadda SAS ayaa sidoodii u socon doona maanta, halka horeba loo joojiyey dhowr duulimaadyo shaqaale darro aawaodood. Halka dhanka kale la ballan qaadey in haddii uu dib u dhac ku yimaado diyaarado kale lagula socodsiin doono rakaabka dhanka farriinmmaha telefoonnada ee SMS-ka loo yaqaanno.
Habeen-nimadii xalay ayaa la hadal hayey iney xilligii ey u qabteen dib u dhigeen maamullada bangiyadii deymaha u ballan qaadey shirkadda dayuurradaha ee SAS, halka ay shirkadda SAS middaasi beenisay.